निर्मला पन्तकी आमाले १ करोड रुपैयाँ र १ बिघा जमिन लगेको, यस्तो लाग्यो ग’म्भिर आ’रोप ! – Life Nepali
निर्मला पन्तकी आमाले १ करोड रुपैयाँ र १ बिघा जमिन लगेको, यस्तो लाग्यो ग’म्भिर आ’रोप !
काठमाडौँ । नेपालसहित करिब एक सय ८० मुलुकमा लैं गिक हिं साविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन भ इरहँदा पश्चिम नेपालको एक सानो गाउँकी दुर्गादेवीले पहिलोपल्ट यस अभियानसँग आफू जोडिएको आभास गरेकी छन् । यसको पछाडिको का रण भने सुखद छैन । मंगलबार दिउँसो उनी यही अभियानका लागि बनाइएको ब्यानरमा लेखिएको नारा सच्याउन महेन्द्रनगर बजार पुगेकी थिइन् ।
विगत पाँच महिनादेखि उनले नगरपालिकाको कार्यालयमा सहयोगीका रुपमा काम गर्दै आएकी छन् । दुर्गादेवी ब लात्का रपछि ह त्या भएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तकी आमा हुन् । निर्मला गत वर्ष ह त्या गरिएको अ वस्थामा कञ्चनपुरस्थित उनको घरबाट केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको उ खुबारीमा फे ला परेकी थिइन् । नि र्मलाको ब लात्का रपछि भएको ह त्याको विषयले मु लुकलाई नै आ न्दोलित बनाएको थियो ।
उनका ह त्यारालाई कार बाही माग गर्दै गत वर्ष लामो समयसम्म देशभर व्या पक वि रोध प्रद र्शन भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि प्रहरीले उनका ह त्यारालाई का रबाहीको दा यरामा ल्याउन सकेको छैन । निर्मालाको न्यायको ल डाइँ जारी नै छ । दुर्गादेवीले छोरीको ब लात्का र र ह त्या स्थानीय दिलीप सिंहले गरेको आ रोप लगाएकी छन् । अनुसन्धान भइरहेको यो घ टनाबारे प्रहरीले भने मुख खोल्न चाहेको छैन ।
‘तपाईं जुन ब्यानर स च्याउन जानुभयो, त्यो तपाईंले पढ्न सक्नुहुन्छ ’ यसमा दुर्गादेवीको जवाफ थियो, ‘म पढ्न सक्छु, यसमा महिला हिं साका बारेमा लेखिएको छ, यो म हिला हिं सा अन्त्य गर्नका लागि हो ।’ दुर्गादेवी महिला हिं सा त्यति बेला भएको म हसुस गर्छिन् जति बेला न्या यका लागि ठू लो स्व रमा रुँ दा समेत सु न्ने कोही हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाले निर्मला प्र करण सा मसुम पार्न दुर्गादेवीले लाखौं रुपैयाँ लि एको आ रोप लगाइरहेका छन् । ‘मा निसहरुले मेरो बा रेमा अनावश्यक आ रोप लगाइरहेका छन् । उनीहरुलाई था हा छ, मलाई कसैको सहयोग छैन तर अ नावश्यक रुपमा आ रोप लाग्न थालेपछि म क ठोर ब न्दै गएकी छु ।’
सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाले निर्मला प्रकरण सामसुम पार्न दुर्गादेवीले लाखौं रुपैयाँ लिएको आरोप लगाइरहेका छन् । समाजशास्त्रीले यसलाई दुर्गादेवीवि रुद्ध डि जिटल हिं साको सं ज्ञा दिएका छन् । नि र्मलाको ब लात्कार पछि ह त्या भएल गत्तै प्रहरीले बिष्ट लाई प क्राउ गरेको थियो ।
तर केही स्थानीय मि डियाले प्रहरीले भि आइपी ब लात्का री तथा ह त्यारालाई जो गाउन प्र माण नष्ट गरेको आ रोप लगाए, जसको परिणाम मानिसहरु नि र्मलाका वास्त विक ह त्यारालाई का रबाहीको मा ग गर्दै सडकमा उत्रिन थाले । निर्मलाको यौ नां गबाट सं कलन गरेको डि एनए पनि बिष्टसँग नमिलेपछि स्थिति थप जटिल अवस्थामा पुग्यो । भिडले बिष्टलाई छा ड्न र ला परबा ही गर्ने प्रहरी अधिकारीहरुलाई का रबा हीको माग गर्‍यो । दुर्गादेवीले आठ जना प्र हरीवि रुद्ध उ जुरी दायर गरिन् ।
‘मेरो फोन अफ थियो, उक्त फोन शारदा चन्दले लिएकी थिइन् । उनले मलाई स्वतन्त्ररुपमा बोल्न दिइरहेकी थिइनन् । काठमाडौंमा समेत उनले म लाई कसैसँग बोल्न दिइरहेकी थिइनन्,’ दुर्गादेवीले विगत सम्झँदै भनिन् । उनका अनुसार अधिकांश अधिकारकर्मी या तना दिन आएका थिए । ‘केही अ धिकारकर्मी म सँगै थिए, उनीहरुले मलाई गाउँमा बस्न दिए नत्र हामीलाई घरबारवि हीन बनाउँथे ।
मैले सरकारबाट रा हत रकम लिएपछि उनीहरु सबै मेरा वि रुद्ध लागेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि उनीहरुले मलाई दुःख दिइरहेका छन् । उनीहरुले त मलाई मा न्छे नै गन्दै नन् किनभने मेरा श्रीमान् म सँग बस्दैनन् र मेरा छोरा पनि छैनन् ।’ सामाजिक स ञ्जालमा उनीमाथि हिं सा गर्नेमा स्थानी य प त्रकार खेम भण्डारी पनि भएको दुर्गादेवी बताउँछिन् । भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा दुर्गादेवीले छोरीको न्यायलाई पैसामा बिक्री गरेको भनी भ्रम फैलाएको उनले बताइन् ।
भ ण्डारीमाथि घ टनालाई स नसनीपूर्ण बनाएको, ब लात्का र र ह त्याको समाचार तोड मोड ग रेको आ रोपमा मा नहा नी मुद्दा लागेको थियो। उनले जि ल्ला अदालतबाट स जाय भोगिसकेका छन् । भण्डारीले हालै सा माजिक स ञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अनु सन्धान आमाबाट सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘उनले दिलीप बिष्टलाई फ साउन एक करोड रुपैयाँ र एक बिघा जमिन लिएकी छन्,’ भण्डारीले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन् ।
यसबारेमा भण्डारीसँग कुरा गर्दा उनले दुर्गादेवीले आमाको प्रतिष्ठा जोगाउन नसकेको आ रोप लगाए । ‘उनले आमाको प्रतिष्ठा जोगाउन सकिनन्, कञ्चनपुरमा उनको आ लोचना भइरहेको छ,’ भण्डारीले भने । कञ्चनपुरमा आ फूलाई वि श्वास गर्ने केही स्थानीय सञ्चारक र्मीको सहयोगमा भण्डारीले नि र्मला प्रकरणलाई आफू अनुकूल प्रचार गर्न सफल भएका थिए ।
दुर्गादेवीले आफूले पैसामा छोरीको न्याय बेचेको पुष्टि भए जान तयार भएको बताइन् । पुष्टि नभए यस्ता आ रोप लगाउनेमाथि का रबाही हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘उनीहरुले मेरो बारेमा ग लत कुरा भनिरहेका छन् । मेरा श्रीमान् म र मेरा छो रीहरुलाई माया गर्दैनन् । भण्डारी जस्ता मानिसहरु यसबारेमा जानकार छन् । त्यसैले उनीहरुले मेरा श्रीमानलाई आफ्नो हा तमा लिएका छन्,’ फे सबुकमा भण्डारीले लेखेका विषयमा बताउँदै दुर्गा देवीले भनिन् । – यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा अञ्जली सुवेदीले लेखेकी छन् ।
Previous अर्घाखाँचीमा बस दु’र्घटनामा ज्या’न गु’माएकी सिता बस्नेत !
Next होन्डा कम्पनीमा मासिक २० हजार आउने जागिर मिलाइ-दिन्छु  भन्दै भाउजूले नै पुर्‍याइन् दिल्लीको वे’श्यालयमा